“Walii Galan Alaa Galan” – Ibsa Eegdota Warraaqsa Oromiyaa |
Home Afaan Oromoo “Walii Galan Alaa Galan” – Ibsa Eegdota Warraaqsa Oromiyaa
“Walii Galan Alaa Galan” – Ibsa Eegdota Warraaqsa Oromiyaa
Ummannii Oromoo Qabsoo barootaaf taasisaa ture keessatti, Tokummaa isaa cimsachuun Injifataa ta’eera. Ammas haaluma wal fakkaatuun Bilisummaa fi Walabummaa gonfachuuf jabinnaa fi tokkummaa isaan falmachaa jira.
Ummatni Oromoo Harqoota gabrummaa jaarraa tokkoof walakka oliif irraa ture of irraa kuffisee mirga abbaa biyyummaa isaa deebisee gonfachuuf, bilisummaa diinaan sarbamee deebifachuuf, walumagala hiree ofii murteeffachuuf wareegama qaqqaalii baasaa tureera. Keessummattu qabsoon bifa adda addaatiin deemaa ture bifa tokkummaa Oromoo tiksuu fi qindoomina qabuun erga hoggansa ABOtiin eegale asillee wareegama ulfaataa baasee jira; rakkoolee adda addaa fi bu’a ba’i hedduu keessa darbee as gahe. Waggoota shanan darban keessa qabsoon hirmannaa ol aanaa ummata Oromoo bal’aa addatti ammoo Qeerroo fi Qarree Oromoon deemaa ture kan lubbuu kuma hedduu itti wareegamee fi qaamaaf qabeenya hedduu itti dhabeen akka diinaaf hin jilbiifannee fi tokummaan isaa humna diinaa laafisuu danda’u diinatti agarsiiseera.
Sirni shororkeessaa (terrorist)ADWUI/EPRDF waan ummtarran gahaa ture osumaa beekuu, maqaa ceehumsa jedhuun sobaa fi sossobaan ummata gowwoomsee Olaantummaa seeraa eegsifna jedhun waraana labsuun lubbuu kumaatamaan balleessuu, sirna Federalizimi qabsoo ummataan dhufe diiguu fi mirgaa dhala namaa sarbuutti gadi taa’e; Inummayyuu, Partiin ADWUI/EPRDF mirga uumaamaa fi seera addunyaan kan beekkame diimokiraasi ummatni biyyatti wareegama meeqa itti baasee asiin gahe kana akka keennaatti ilaaluu filate.
Murni ADWUI/EPRDF mootummaa dha ofiin jettu, Gochaa hammeenyaa ummata keenya irratti raawwataa turteen, Ummata keenya jumlaan manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhuun dararuu, Ajjeesuu, qe’ee isaanii irraa buqisuun baqachisiisuu, qabeenya saamuu fi manneen ummataa qabeenyaa waliin gubaa ture, ammas itti jira. Gochaa hammeenyaa raawatee kanaaf gadi jabeesinee balaaleffanna.
Dhiittaa Mirga Namoomaa mootummaan Oromoo Walloo irratti raawwate gadi jabeesinee balalefanna. Ummanni Oromoo bal’aan Golee Oromiyaa Cufa Keessatti Mirga Abbaa Biyyummaa Isaa Gonfachuuf wareegama Ol aanaa qaamaa qalbii baaseera; Addatti garuu, Oromoon Walloo Dhiibbaa fi Dhittaa Gabroomsaan Jaarraa Oliif Irra gahaa tureen miidhama hangana hin jedhamne miidhameera.Akka kanaan, Mirga Abbaa biyyummaa fi bilisummaa Oromoo dhugomsuuf wareegamni Oromoon Walloo baasee ol’aanaa dha.
Haa ta’u malee rakkoo humna oliitiin mootummaa naannoo isaanii hinmalle jalatti ramadamanii dararamaaf saxil bahun sirrii hin turre. Eegdonni Warraaqsa Oromiyaa ummatni kun bulchinsa mootummaa Oromiyaa jalatti caseeffamee buluu akka qabu amantaa guutuun hojjacha jira. Eegdonni Warraaqsa Oromiyaa Umanni Oromoo Walloo bulchinsa gaarii dhabuun badii ummatarra gaheef gadda guddatu itti dhagahama. Yeroo Ceeyumsaa kana ummatni Oromoo Walloo mootummaa cehumsa Oromiyaa keessatti bakka bu’aa ni qabata.
Labsiii Labsamu kana irratti Jaarmiyaaleen Oromoo Kaayyoo Ummanni Oromoo Barootaaf irratti wareegama ture cinaa dhaabatanii waregama isaan irraa eegamu kafalan cufayyuu Eeggumsi Waraaqsa Oromiyaa galateeffataa, fuula duraafis akeekaa fi kaayyoo Ummata Oromoo akka galiin gahniif ni jajjabeessa, waliin hojeta.
Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Addi Bilisummaa Oromoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabachiisuuf waayita murteessaa kanatti qabsoo hadhooftuu taasisaa jirutti hogganni jaarmiyaa kanaa dirqamaa fi itti-gaafatammummaa olaanaa fi muteessaa fudhatee socho’a jira/ socho’us qaba. Rakkoolee fi bu’aa-ba’i bara dheeraa keessa dabrame xinxaluun qabsoo bilisummaa xumurrarraan gahuuf bilchina adda ta’een yeroo hoggana furtu ta’e kennuu qaburra gaheera. Haala murteessa kana keessatti hogganni martuu kaayyoo jaarmayaa isaanii fi waliifis amanamaa fi galafata jaallan wareegamnii galmaan gahuuf daran cimanii hojjachuutu irraa eegama.
Marii dhimma egeree Oromoo ilaalchisee ta’urratti heeraa fi seera ABO irratti hundaa’uun caasaa gubbaa hanga gadiitti walquba qabachuun murtoo barbaachisaarra gahuun dirqama ta’a. Hogganni ABO waliigaltee mootummaa Itoophiyaa wajjin taasise sirrii akka hin taane hubatee, Kana boodas mootummaa seerawaa Ummattoonni biyyattii filatu wajjiin bakka qaamni sadaffaan addunyaan beekamtii kenneef argameetti irra deebi’amee walii galtichi bifa sirrii ta’aeen ilaalamu qaba jenna.
Haaluma kanaan, Koreen Seeraafi To’annoo miseensota ABO dirqamarra jiran hordofaa kanneen haaduu qaralamaa ta’anii qabsicha gufachiisaa jiran irratti Gumii Sabaatti dhiheessee tarkaanfii seeraa fudhatu qaba. Koreen kun seeraa fi haqaarratti hunda’ee miseensaa dhaabaa jalaarra haga hooggana gubbaatti to’achuuu qaba. Hojii isaa mijeeffachuu akka danda’uuf Koreen Seeraafi To’annoo waajjira beekamaa fi sarara quunnamtii (fkn. Bilbila, poostaa, email kkf) addatti qabaachu akka qabu hubachiifna.
ABOn miidiyaa saboota cunqurfamaaf sagalee ta’an kan akka Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO), Oromia News Network (ONN) fi kanneen biroo dhugaaf dhaabbatan daran akka ummata tajaajilaniif jecha handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti waajjira gadi dhaabbatanii odeeffannoo qulqulluufi dhugaa tamsasan yaadachifna.
Kongressi Federala Oromoos (KFO)nis, haaluma kanaan hoggansa isaa tohatee cimsuun akka socho’u yaadachifna. KFOn mootummaa ADWUI/EPRDF wajjin qabsoo karaa nagahaa geggeessuuf murteeffatee qabsaawaa turus, murna ADWUI/EPRDFn gaaga’amni olaanaan miseensota isaa irra gahaa tureera. Hooganni olaanaan dhaaba kana qabsoo wareegama gurguddaan as gahe kanarraa akka of duuba hin deebinee fi isarrayyu taree Hoogansa gaarii sabicha bakka bu’u argachuuf daraan hojjetaa jiraachutti amanna.
Haa ta’u malee, akkuma Hooganoota muraasa ABO, hooganoonni KFOs muraasni isaanii mootummaa ADWUI/EPRDF deggeruun akka sosso’a turan ifatti beekama. Hooganoonni akkasii bobaa dhaaba Oromoo jala taa’anii warreen qabsoo ummataa duubatti deebisuu fi dantaa dhunfaa isaaniif qofa hojjatan xaliilee basuun akka seeraa fi dambii ittiin bulmaata dhaabichaatti tarkaafii sirreessaa irratti fudhatu cimsinee hubachifna.
Dhaabbileen laman (ABO fi KFO)n kaayyoo ummatni qabsa’eef galiin gahuuf wareegama kamuu akkuma armaan duraa kaffaluuf murannoo kan qaban ta’uu Eeegdonni Warraaqsa Oromiyaa amanee jira. Kanaaf jecha, dirqama Oromiyaa gara bilisummaa fi diimokraasitti cesisuuf isinitti kenname hojiin akka argisiiftan cimsinee isin yaadachiifna.
Kanaaf, adeemsa karaarraa maqee fi qabsoo ummataa dubaatti harkisaa jiru gara karaa sirriitti deebisuun dirqama ta’a. Eegdonni Warraaqsa Oromiyaa (EWO) jaarmayaalee mirga ummata isaanitiif falamaa turanii fi jiran cinaa dhaabbatee waan lammiileen Oromiyaa murteeffataniin gumaachaa isarraa eeggamu of qusannoo malee akka taasisu hubachiisaa,Jaarmiyaaleen Oromoo uumata isaanitiif dhaabbatan ceeyumsa kana milkeessuuf waan isaan irraa eeggamu hunda akka godhan shakkii hin qabnu. Kanarraa ka’uun, Jaarmiyaalee Oromoo jiran keessaa Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) fi Kongrasiin Federaala Oromoo (KFO)n cehumsa karaarra maqe karaa sirritti deebisuun akeeka ummatni qabsa’eef galiin gahuuf akka hojjetan murteessineerra.
Dheerinni yeroo ceeyumsaa miseensota Caffee Naannoo Oromiyaatii fi bakka bu’oota hawaasaa gara garaatiin kan murtaa’u ta’a.
Lammiileen Oromiyaa yeroo ce’umsa kana keessatti koree ce’umsaa jaarmiyaalee lamaan ABO fi KFO irraa tolfamaniin hogganamu.
Eegdonni Warraqsaa Oromiyaa, Lammiileen Oromiyaa jijjirama kana fiduuf itti waregaman qabsichi butamuun karaarraa maqee dantaa warreen farra Oromootii akka ta’utti tolfamaa jirachuu isaa sochiilee ta’aa jiraniirra tolchee hubateera.
Eegdonni Warraaqsa Oromiyaa, akeeka qabsichaa bakkan gahuun Oromoota lubbuun jiran hundarra kan eeggamu ta’utti amanu. Kanaaf jecha hanga mootummaan cehumsaa walaba ta’e akka biyyatti ijaarammuutti, Eegdonni Warraqsa Oromiyaa (EWO) Mootummaa Naannoo Oromiyaa tohachuun/ dhunfachuun fedhii fi dantaa lammilee Oromiyaa guutuuf bulchiinsa haaraa muudera.
Mootummaan ADWUI/EPRDF sirna bulchinsa Naannoo Oromiyaa keessaa sochii kammirrayyuu akka seeraan ugguramee fi gocha shororkeessummaa waggootii dheeraaf ummatarran gahen seeran qoratamee itti gaafatamu Eegdota Warraaqsa Oromiyaatiin murtaaheera.
Kanneen, aadaa fi duudhaa Oromoon jaallatu maxxanfatanii uummaticha afaan faajjeessuun gabrummaa jalatti hambisuuf tattafatan qaamoolee hawaasaa kanneen akka maqaa Abbootii Gadaa, maqaa Hayyoota Oromoo, maqaa Daldaltootaa fi kkf ti dhimma bahuun lammiilee Oromiyaa burjaajessuu irraatti bobba’an akka gochaa hammeenyaa kanarra dhaabbatan akeekkachiisna. Kanneen dantaa ummataa kana gardabsanii beekkamtii argachuuf jecha, dhimma ofiif olfachuuf itti fufanirratti tarkaanfiin seera akka fudhatamu jabeesinnee hubachiifna.
Paartiin waggoota darbaniif,biyyaa bulchaa ture ADWUI/EPRDF Oromiyaa keessatti farra guddinaa fi diimokiraasii akka te’e ummatni martuu kan beekudha. Gochaalee hamoo Paartiin kun ummata Oromoorran gahe ilaalchisee marii dheera taasifameen Partiin kun shororkeessaa (terrorist) akka ta’e irratti waliigalameera. Kanarra ka’un Paartiin kun gutuummaa Oromiyaa keessatti sochiin kamirrayyuu ugguramee baadii sirni kun bakka garaagaratti ummatarran gahe qamaa seerawaa taheen qoratamee seeratti akka dhiyaatu murteeffamera.
Guyyaa labsiin kun maxanee eegalee lammileen Oromiyaa Paartii shororkeessaa ADWUI/EPRDF kana wajjin miseensummaa fi bifa birootiin (fkn, wirtuulee daldala, dhabbilee barnootaa dhunfaa fi tola ooltummaa k.k.f) hidhata qaban yakkarraa walaba ta’u isaanii barrefamaa irratti mallatteessanin iddoo akeekametti sa’aatii 48 hin caalle keessatti akka xumuratan hubachiifna. Bakki itti iyyatan kun yakkarra walaba ta’u kan mirkaneesuu fi yeroo qaama dhimmi ilaallatuun gafataman kan kennuuf ta’a.Qajeelfamni kun lammilee Oromiyaa kanneen hojii dipilomaasiirratti ramadaman, miseesota Paarlamaa fi dhaabbilee addunyaa keessatti bakka bu’otaa ta’anis ni ilaallata. Yeroo murteefame keessatti kanneen dhihachuu didaniif seeraan ugguramanii akka tohataman murtaa’eera.
Eegdonni Warraaqsa Oromiyaa (EWO) nageenyi waaraan bara baraan akka jiraatuuf, fedhii ummataa halaan hubachuun akka barbaachisutti amanu. Kanarratti hundaa’un murtoo jajjaboo hoggannotni irratti walii galan hojjitti hikuuf qaamoolee caaseffamanii dhimmi ilaalutti dabarsuun yeroo jedhameetti hojiirra oolu isaanii hordofee mirkaneeffata.
Yeroo cehumsaa kana keessatti caasaaleen taajajila ummataa kennuuf armaan dura diriiran itti gafatamtummaan tajajila isaanii kennuu itti fufu; namoota ceeyumsi kun akka bakka yaadame gahuuf akeeka qabaniin hogganamu.
Lammiileen Oromiyaa yeroo ceeyumsaa kana keessatti siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa fi aadaa ofii barbaadan mootummaa ce’umsa Naannoo Oromiyaa gargaaruun ijaarachuu ni danda’an.
Dhabbileen addunyaa adda addaa kanneen akka Mootummaalee Gamtoomanii,Gamtaan Afriikaa, Dippiomaatonni biyyoota adda addaa,Tokkummaan Awurooppaa, Dhaabbilee Miti-motummaa fi Dhaabbileen mirga dhala namaatiif falmatan hundi, Mootummaan ADWUI/EPRDF carraa ummatni biyyatti kennefitti gargaarame of jijjiiree biyyas jijjiira jedhamee osoo eegamu kana gochuu dadhabuu isaa fi inumayyuu biyyitti rakkoo walxaxaa biraaf qopheessaa akka jiru haalan hubattaniitu jenne amanna.
Dippilomaatota Magaalaa Finfinnee keessa jiraattaniif, Dipilomatooti Finfinnee keessa jiratan nageenya keessaniif jecha sochii keessan naannoo moraa Embaasii qofa akka ta’u isin hubachiifna/isin gorsina.Waajjiraleen Embasootaa fi manneen jireenyaa dippilomaatotaa sa’aatii 24 walitti fufinsaan humna addaa Eegdoota Biyyolessaa Oromiyaarra ramadameen kan eegamu ta’a.
Eegdonni Warraqsaa qaamni kamuu sirna bututee kufe kana suphuu fi gargaarsa godhufiin farra nagaa fi dimokirasii akkasumas faalla dantaa ummataa bal’aa fuldura dhaabbachuu akka ta’etti hubataa,gama keenyaan, Paartii shororkeessaa ADWUI/EPRDF wajjiin haasaa bifa kamiiyyuu taasisuuf balballi cufamuu isaa jabeessinne dhaamanna.Garuu,Motummaan Cehumsaa Oromiyaa mootummaa cehumsaa sadarkaa Itoophiyaatti hundeeffamu keessatti qooda irraa eegamu gumachuuf qophii ta’uus hubachiifna.
Mootummoota Naannoolee miseensota Ripaablika Itoophiyaa ta’an, yaada murtoo Oromiyaan fudhatteen wal fakkatu qaban waliin hojjachuuf qophi ta’u keenya beeksisna; Warra murtoo nuti fudhanne kana fudhachuu barbaadaniif gargaarsa barbachisuu hundaa gama Mootummaa Cehumsaa Oromiyaatiin akka taasifnu hubachiifna. Haaluma kanan, sabaaf sabalammoota biyya keessa jiran maraaf murnii ADWUI/EPRDF maqaa Oromoon bu’aa injifannoo qabsoo butee dantaa biraaf tattaafacha ture akka Oromiyaa fi lammiii Oromiyaa bakka hin buune Jabeesinee/gadi qabnee isin hubachiifna.
Ministeerotaa fi Aanga’oota olaanaa waajjiraalee Federaalaa geggeesitan hundaaf, walitti bu’insa hanqisuu fi nagaa fi tasgabbii buusuuf jecha Fulbaana 21,2019 jalqabee hanga ibsi kennamutti toora mana jirenyaa keessan qofatti akka argamatan murta’eera. Konkolattonni mootummaa fi dhaabbilee miti-mootummaa hanga ibsi kennamutti akka hinsochoone murta’eera.
Haala nageenya tiksuun walqabatee seensaa fi bahumsaa magaalaa guddittii Finfinnee kallatti hundaan ni cufama. Akkasumaas daandiin balalii Xiyaaraa keessaa fi Idil Addunyaa Boolee hanga ibsi kennamutti guyyaa murta’ef ni cufamu.
Dhaabbileen fayyaa, Qorattoota mirga dhala namaa fi Gazexesitootaaf qaama dhimmi ilaaluun hayyamni ni kennama.
Lammiileen Oromiyaaa Raayyaa Ittisa Itiyoophiyaa keessaa dirqama adda addaarra jirtan, Olaantummaa seera kabajchiisuun Yakka Raayyaa Ittisa Biyyaatiin lammiilee biyyattiirratti raawwatamaa jiru akka dhaabdan jenna; Akka walii galaatti Raayyaan Ittisa Itiyoophiyaa lammiilee biyyattii ajjeesuu fi dararama adda addaa irraan gahuurra dhaabbatanii qubsuma seeran akka raayyaa ittisa biyyaatti isinii qophaa’etti akka qubattan gamanumaan isin hubachiifna. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa bakka seeran hayyamameef alatti argamee dirqama Poolisii Mootummaa Naannoo keessa galuun waan isin hin ilaallanneetti bobba’uu irraa akka duubatti deebitan cimsinee hubachiifna.
Miseensi Raayyaan Ittisaa kamuu sarara daangaa Federaalizimiin mooraa qubsuma isaaf akeekame ala argaman hundi itti gaafatamaan matuma isaanii ta’a. Baajatni Raayyaa Ittisaa Ithiopiyaa ittiin socho’u gibira Ummattoonni Itiyoophiyaa baasaniin/kaffalaniin ta’unsaa dagatamuu hin qabu. Kanaaf jecha Raayyaan Ittisaa kun sirna burjaja’ee fi nam-tokkee tajaajiluu irraa gara nageenyaa fi tasgabbii ummatichaa eeguutti xiyyeeffachuu akka qaban akkeekkachifna.
Guyyaa gaafa mootummaan ceeyumsaa kun labsametti, Dursa hojiin hojjetamu guutummaa Golee Oromiyaa keessaa Hidhamtoota Siyaasaa Oromiyaa keessaa Manneen hidhaa Gandeen Baadiyaa irraa hanga sadarkaa manneen hidha Federaalaatti hidhamnii Murna Gabroomsaa kanaan hiraarfamaa jiran, Iddoo manneen hidhaa itti dhihaatu cufatti ummanni bahee simachuun mana hidhaatii kan yaasuu ta’a.Yeroo mootummaa ceeyumsaa kana keessa dirqama kallatii hundaatuu raawwatee kan raawwachiisu caasaalee humna nageenyaa armaan gadiiti.
Humna Eeggumsa Biyyoolessa Oromiyaa
Waaltaa Qaruuxee Oromiyaa
Waraana Bilisummaa Oromoo(WBO)
Lammiilee Oromiyaa Poolisii Federaalaa keessa jiran
Lammilee Oromiyaa Raayyaa Ittisa Itoophiyaa
Biiroo Bulchiinsa Nageenya Oromiyaa
Miseensota Tika Biyyoolessaa Itoophiyaa
Humnootni armaan olii kunneen ajajaa fi qajeelfama nageenya kabajisiisuu kan fudhatan Waajjira Humna Eeggumsa Biyyoolessa Oromiyaa irraayi. Humnootni Oromiyaa eegan ajajaa fi qajeelfama fudhataniin, dantaa paartilee siyaasaa ykn nama dhuunfaaf dhaabbatan osoo hin taanee, Heeraa fi Seeraa lammileen Oromiyaa tolfatanii irratti walii galan kabachisu/ tiksu/ eegu ta’a. Eegdonni Warraaqsa Oromiyaa adda durummaan dangaa, nageenyaa fi olaantummaa seeraaf wabii ta’anii kan dirqama isaanii bahanii dha.
Previous articleConcern over the worrying political, religious and security development in Ethiopia
Next articleOdeessa mootummaan Ethiopia garee shororkeessaa ISIS fi Alshabab magaalaa Finfinnee keessatti to’anne jedhu guutummaatti kijibadha